डा. केसीविरुद्ध थापाले अनसन सुरु गरेपछि इलाममा तनाव — Hamro Sanchar
डा. केसीविरुद्ध थापाले अनसन सुरु गरेपछि इलाममा तनाव
हाम्रो संचार संवाददाता प्रकाशित : २०७५/९/२८ गते
बरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको अनसन विरुद्ध इलाममा एक ब्यक्ति अनसन बसेका छन्।डा केसीले आफ्नो १५आैं अनसनका क्रममा आफूसँग भएको सहमति पालना गर्न माग गर्दै अनसन बसेको चार दिन भएको छ। केसीले आफूसँग सरकारले गरेको सहमति विपरित संसद्को स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिबाट हालै पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयक सच्याउनु पर्ने माग गर्दै अनसन बसेका हुन्। तर संसदीय समितिले पास गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेक संसदबाट पारित गराउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय विजय थापा अनसन बसेका छन्।
दुई अनशनकारी पक्षका समर्थक अहिले खुलेरै एकअर्काको विरोधमा उत्रेका छन्।
डा केसी अनशन बसेको तेस्रो दिन संसदीय समितिद्वारा पारित विधेयकलाई विना परिमार्जन संसद्बाट पारित गरिनुपर्ने माग गर्दै थापाले अनसन शुरु गरेपछि सो स्थिति पैदा भएको नेपाल खबरमा समाचार छ ।
शुक्रबारबाट अनशनमा रहेका थापाको मागको पहिलो बुँदामै संसद्मा रहेको चिकित्सा विधेयक कुनै पनि हालतमा पास गर्न माग गरिएको छ। जनप्रतिनिधिबाट पारित भएको विधेयकलाई पारित हुनुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर देशभरी नै मेडिकल कलेज खोल्ने र खुलाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेलगायतका माग थापाले अघि सारेका छन्।
डा केसी र थापाले अनशन शुरु गरेपछि आआफ्नै माग कार्यान्वयनका लागि र्‍याली लगायतका गतिविधि हुन थालेका छन्। त्यसले दुई पक्षबीच झडप हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ।